ဘီလီဇ်တွင်အိုင်ဘီစီကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း - ဘီလီဇ်နိုင်ငံရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ
သင်ဘေလီဇ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကသင်သည်မှန်ကန်သောနေရာတွင်ရှိနေသည် -
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့နှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့သည်။
Million Makers Belize သည် Belize နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ ခုအတွက် Clients များထံအခမဲ့ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဆိုင်ရာအကြံပေးခြင်းကိုပေးသည်။
ဘီလီဇ်မှကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ဒေသများနှင့်လွတ်လပ်သောဇုန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသည်။
ဘီလီဇ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီအတွက်ကော်ပိုရိတ်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ဘဏ်ကိရိယာ (အမိန့်ပေးလျှင်) ပို့ခြင်း။
Belize နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ ခုအတွက်သင်၏တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ
ဘီလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အတွက်ဘဏ်အကောင့်၊ ဘီလီဇ်အတွက်ငွေပေးချေမှုတံခါးပေါက်၊ ဘီလီဇ်အတွက် Virtual နံပါတ်၊ ဘီလီဇ်အတွက် CRM Solutions၊ ဘီလီဇ်အတွက် virtual ရုံး၊ ဘေလီဇ်အတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအတိုင်ပင်ခံနှင့် 109 နိုင်ငံများနှင့်အများကြီးပို။
ယနေ့သင်၏ဘီလီဇ် IBC နာမည်ရယူပါ။
သင့် Belize IBC နာမည်ကိုရှာပါ
ယခင်ကဘီလီဇ်ဟုခေါ်သောဘီလီဇ်သည်အမေရိကအလယ်ပိုင်း၏အရှေ့မြောက်ကမ်းရိုးတန်းတွင်တည်ရှိသောကာရစ်ဘီယံနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဘီလိဇ်သည်အနောက်မြောက်ဘက်တွင်မက္ကစီကို၊ အရှေ့ဘက်တွင်ကာရေဘီယန်၊ တောင်ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တွင်ဂွာတီမာလာနှင့်နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသည်။ Belize သည်ယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာစကားများစွာဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည့်မတူကွဲပြားသောလူ့ဘောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီး၎င်းသည်၎င်း၏ကြွယ်ဝသောသမိုင်းကြောင်းကိုထင်ဟပ်စေသည်။ အင်္ဂလိပ်သည်ဘီလီဇ်၏တရားဝင်ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးဘီလီဇန်ကျွန်းသည်လူ ဦး ရေ၏သုံးပုံတစ်ပုံကျော်၏ဘာသာစကားဖြစ်ပြီးယေဘူယျအားဖြင့်အများဆုံးပြောဆိုသောအမျိုးသားဘာသာစကားဖြစ်သည်။ လူ ဦး ရေ၏ထက်ဝက်ကျော်သည်ဘာသာစကားမျိုးစုံပြောဆိုကြပြီးစပိန်စကားသည်ဒုတိယအအဖြစ်ဆုံးစကားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စက်တင်ဘာလအထိမ်းအမှတ်ပွဲများ၊ သန္တာကျောက်တန်းသန္တာကျောက်တန်းများနှင့်ပတ္တာဂီတတို့ကြောင့်လူသိများသည်။
စိုက်ပျိုးရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးအခြေခံစက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့်ကုန်သွယ်ခြင်းများကိုလုံးလုံးလျားလျားအခြေခံထားသည့်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသေးစားဖြစ်ပြီး Belize သည်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသည်မကြာသေးမီကပိုမိုအရေးကြီးလာသည်။ ထို့အပြင်တိုင်းပြည်သည်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ၊ ရေနံစိမ်းနှင့်ရေနံထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ တွင်ပျမ်းမျှ ၃၂၀ m2017 /d(320 bbl / d) ရှိသည်။ စိုက်ပျိုးရေးတွင်သကြားသည်ကိုလိုနီခေတ်ကကဲ့သို့ပင်အဓိကသီးနှံအဖြစ်ဆက်လက်တည်ရှိပြီးပို့ကုန်ထက်ဝက်နီးပါးခန့်သာရှိသည်။ ငှက်ပျောလုပ်ငန်းသည်အများဆုံးအလုပ်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဘေလီဇ်အစိုးရသည်စီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုအတွက်အရေးကြီးသောစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။ စုဆောင်းခြင်းကိုတိုးမြှင့်ရန်အတွက်လျင်မြန်သောအရေးယူဆောင်ရွက်မှုကိုကတိပေးထားသည်။ သို့သော်အသုံးစရိတ်ပြန်လည်ရရှိရေးအတွက်တိုးတက်မှုရှားပါးမှုသည်ငွေလဲလှယ်မှုနှုန်းကိုရုန်းကန်နေရသည်။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ sectors သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်အားဖြည့်ခဲ့ပြီးပြန်လည်တိုးတက်မှု၏လေးရာခိုင်နှုန်းခန့်ကိုခန့်မှန်းခဲ့သည်။ အခြေခံအဆောက်အအုံသည်ကြီးမားသောစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘီလီဇ်တွင်ဒေသ၏အကုန်အကျအများဆုံးလျှပ်စစ်ဓာတ်အားရှိသည်။ ကုန်သွယ်ရေးသည်အလွန်အရေးကြီးသောကြောင့်အဓိကကုန်သွယ်ဖက်များမှာကျွန်ုပ်တို့၊ မက္ကဆီကို၊ ယူကေ၊ ယူကေ၊
Belize မှာထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတယ်၊ ဒါကိုခရီးသွား just ည့်သည်တွေသိတာမဟုတ်ဘူး။ ကမ်းခြေအပြင်ထို့ကြောင့်ရှင်းလင်းသောရေနှင့်နေရောင်ခြည်အပြင် Belize သည်စီးပွားရေးပိုင်ရှင်များနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားငွေကြေးအမြောက်အများပံ့ပိုးပေးသည်။ ဘီလီဇ်သည်အစားထိုးစီးပွားရေးအတွက်အကောင်းဆုံးသောနေရာဖြစ်လေ့ရှိသည်။ သို့သော်သင်စတင်နေစဉ်နှင့်ဘာစတင်ပါ ၀ င်သည်ကိုနားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။ သင် Belize လုပ်ငန်းကိုစတင်ရန်စဉ်းစားပါကအောက်ဖော်ပြပါအချက်များသည်သင့်အားဤနည်းလမ်းအားဖြင့်သင့်ကိုလမ်းပြပါလိမ့်မည်။ ပထမတစ်ခုကို IBC သို့မဟုတ် International Business Company အဖြစ်နားလည်သည်။ ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများအက်ဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံခြားသားများသည်ဘီလီဇ်တွင် IBC ကိုလွယ်ကူစွာတည်ထောင်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် IBC ကို၎င်း၏နယ်ပယ်များတွင်ကန့်သတ်ထားသည်။ IBC သည် Belize ရှိဒေသခံများနှင့်စီးပွားရေးမလုပ်နိုင်ပါ။ ဆိုလိုတာကတော့သင်ဟာဝေးလံတဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားတဲ့ဘဏ္financialာရေးကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုဘီလီဇ်မှာဖွင့်နိုင်မယ်၊ သို့သော် Ambergris Caye တွင်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုဖွင့ ်၍ IBC ဟုမခေါ်နိုင်ပါ။ IBC တစ်ခုကိုစတင်ခြင်းသည်နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက်အကြောင်းပြချက်များစွာဖြင့်အကျိုးရှိသည်။ သင် Belize တွင်နေထိုင်သူများနှင့်စီးပွားရေးမလုပ်နိုင်သရွေ့ IBC သည်သင့်အားသီးသန့်တည်ရှိမှု၊ မယုံနိုင်လောက်အောင်အခွန်သက်သာခွင့်နှင့်အထင်ကြီးလောက်သောပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်မှုကိုပေးသည်။ IBC စီးပွားရေးပုံစံသည်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီပါကဘေလီဇ်တွင်ပိုမိုရိုးရာစီးပွားရေးကိုစတင်ရန်စဉ်းစားပါ။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ဤလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ထိမိသည့်အရာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်ဘေလီဇ်တွင်နေထိုင်ခွင့်မရှိပါ။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘေလီဇ်ရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မရေမတွက်နိုင်အောင်အခြားစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်များအနက်ဘားတစ်ခု၊ စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ရှိဆိုင်တစ်ဆိုင်ပါဝင်နိုင်သည်။ သင်ဤစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှစ်ခုအကြားခြားနားချက်ကိုအသိအမှတ်ပြုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတော်များများကသင်လိုချင်သောရလဒ်နှင့်အတူမည်သည့်အရာနှင့်ဆက်နွှယ်သည်ကိုရှာဖွေရန်အချိန်ယူပါ။
ထိုသုံးပါ အွန်လိုင်း HTML beautifier ဝက်ဘ်ဆိုက် ဝဘ်စာမျက်နှာများအတွက် markup ကုဒ်ကိုအလွယ်တကူတည်းဖြတ်၊
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် - ဘီလီဇ်၊ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်ခြင်းနှင့်ဘီလီဇ်သို့မဟုတ်ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းထူထောင်ခြင်းအတွက်တစ်နေရာတည်းတွင်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူဖြစ်သည်။
ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီပေါင်းစည်းရေး ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းမှစီးပွားရေးအဖြေများအားအဆုံးသတ်ရန်နှင့်ဘေလီဇ်တွင်ရှိသောသင်၏ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသောလူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များကိုငှားရမ်းရန်လည်းကူညီပေးသည်။ ဘီလီဇ်တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ၀ ယ်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင် virtual နံပါတ်၊ ဘီလီဇ်တွင်စီးပွားရေးချဲ့ထွင်မှု၊ ဘီလီဇ်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘီလီဇ်တွင်ဘဏ္consultာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘေလီဇ်ရှိစီးပွားရေးအကဲဖြတ်မှု၊ ဘီလီဇ်ရှိ CRM Solutions၊ ဘေလီဇ်ကုန်သည်အကောင့်၊ တိကျသေချာမှုနှင့်လိုက်နာမှုရှိမှု၊ ဘီလီဇ်တွင်အိုင်တီဖြေရှင်းမှု၊ ဘီလီဇ်တွင် web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဘေလီဇ်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဘီလီဇ်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဘီလီဇ်ရှိအက်ပ်များဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊
ဘီလီဇ်တွင်တည်ထောင်ထားသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် - Belize နှင့် Offshore ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် Belize မှကမ်းလွန်ဘဏ်စာရင်းများအပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံတွင်အဆုံးမှအဆုံးဖြေရှင်းချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ပံ့ပေးသည်။ Belize ရှိသို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာမှစိတ်ကြိုက် HR ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီသောအရည်အချင်းပြည့် ၀ သော ၀ န်ထမ်းများငှားရမ်းရာတွင်ကူညီသည်။ ဘီလီဇ်တွင်ကုန်သွယ်မှုနှင့် ၀ ယ်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင် virtual နံပါတ်များ၊ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိဥပဒေရေးရာ ၀ န်ဆောင်မှုများ၊ ဘီလီဇ်ရှိစီးပွားရေးအတွက်စီးပွားရေးအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ဘဏ္financialာရေးအတိုင်ပင်ခံ၊ ဘီလီဇ်တွင်စက်ပစ္စည်းများငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်ဘေလီဇ်တွင်ငွေကြေးအရင်းအနှီးငွေကြေးထောက်ပံ့ခြင်း၊ ဘေလီဇ်တွင်လုံ့လဝီရိယရှိခြင်းနှင့်လိုက်နာမှုရှိခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိအိုင်တီဖြေရှင်းနည်းများ၊ ဘီလီဇ်ရှိ web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဘီလီဇ်ရှိအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ အလွန်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းများဖြင့်အနည်းငယ်ကိုဖော်ပြရန်ဘေလီဇ်ရှိ Blockchain ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ဘီလီဇ်၌ IBC အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကုန်ကျစရိတ်
ဘီလီဇ်အတွက်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဘေလီဇ်အတွက်စျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းန်ဆောင်မှု
“ Million Makers မှာကျွန်တော်တို့ဟာဘီလီဇ်နဲ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တည်းတောင်မှကမ်းလှမ်းတဲ့နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံမှာ ၀ န်ဆောင်မှုတွေအများကြီးကိုပေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာဖြေရှင်းချက်တွေကိုအဆုံးစွန်ပေးနေပါတယ်။ ယနေ့ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားကူညီပေးနေသည်၊ စီးပွားရေး၏အကြီးမားဆုံးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေလီဇ်တွင်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းများဖြင့်တတ်နိုင်သောဈေးနှုန်းဖြင့်ရောင်းချပေးပါသည်။ WE Belize အတွက်အဖြေရှာပေးသူများသာရှိပါသည်။
Belize ရှိကျွန်ုပ်တို့၏အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များနှင့် Belize ရှိအကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုစာရင်းကိုင်များကသင့်အားလမ်းပြလိမ့်မည်။
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း belize (၁ နှစ်)
ဝန်ဆောင်ခ ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း belize (နှစ် ၂ နှစ်)
အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်ခအတွက်ကျသင့်သည် ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း belize
များအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း belize
ဘီလီဇ်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက် ၀ န်ဆောင်မှုများ ဝန်ဆောင်မှုကြေး
ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီအတွက်အစုရှယ်ယာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် Logo ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း Belize
ဘီလီဇ်ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီအတွက်ဒါရိုက်တာ / ရှယ်ယာရှင်ပြောင်းလဲမှု
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ကုမ္ပဏီ Chop and Seal Belize
ဘီလီဇ်တွင် IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအခကြေးငွေ
● IBC ဘေလီဇ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုကြေး - ပထမနှစ် - ဒေါ်လာ ၃၅၀
●ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအတွက်အစိုးရအခကြေးငွေနှင့်ဝန်ဆောင်မှုခ - ဒေါ်လာ ၃၅၀
●နာမည်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အတည်ပြုခြင်း (ဘီလီဇ်တွင် Company TYPE3ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာအမည် ၃ ခုပေးပါ။ )
●ဘီလီဇ်တွင် IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုသက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းဖြင့်တင်သွင်းခြင်း
●ဘီလီဇ်ရှိ IBC အတွက်အစိုးရ၏အခကြေးငွေတစ်နှစ်ပေးဆောင်ခြင်း
●ဘီလီဇ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်နှင့် IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်ထားသောလိပ်စာကိုတစ်နှစ်ထောက်ပံ့ရန်
●ဘီလီဇ်မှာရှိတဲ့ IBC ကုမ္ပဏီရဲ့အတွင်းရေးမှူးတစ်ယောက်ကိုတစ်နှစ်ပေးအပ်ခြင်း
●ဘီဘီစ်၌ IBC အတွက်သင့်အတွက်စံပြကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများကိုလည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်။ အဲဒီမှာအသင်း ၀ င်စာချွန်လွှာများ၊ အသင်း ၀ င်မှုများ၊ မှတ်ပုံတင်လက်မှတ်၊ အစုရှယ်ယာလက်မှတ်များ၊ ပထမဒါရိုက်တာများခန့်အပ်ခြင်း၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်းဝင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ပါ ၀ င်သည်။
သင်သည်ဘီလီဇ်တွင်စီးပွားရေးစတင်ရန်၊ ဒေသအရင်းအမြစ်များကိုသင်နှင့်နီးစပ်စေရန်အခမဲ့အကြံဥာဏ်ပေးသည်။ သင်သည်ဘီလီဇ်သို့မဟုတ်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ၌စီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတင်လိုပါကအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်နိုင်သည်။
IBC Belize အတွက်ကုန်သည်အကောင့်
ဘီလီဇ်တွင် IBC အတွက်အမည်စာရင်းညွှန်ကြားရေးမှူး
IBC Belize အတွက်အစုရှယ်ယာရှင် ၀ န်ဆောင်မှုများ
IBC Belize အတွက်လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည့်အစုရှယ်ယာများတိုးပွားလာခြင်း
ဘယ္လို ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ပါ Million Makers မှတဆင့်ဘေလီဇ်၌တည်၏
သင်ကဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်လိုလျှင်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ဘီလီဇ်ကုမ္ပဏီသို့မဟုတ်အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များကိုမည်သို့ရှင်းလင်းရမည်ကိုရှင်းလင်းစွာ၊ ဘီလီဇ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များသည်ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကုန်းတွင်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။ ဘီလီဇ်အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၉) နိုင်ငံ၏နိုင်ငံတကာဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ယက်နှင့်ဘီလီဇ်၌ရှိသောကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောမိတ်ဆက်သူအဖြစ်သင်သည်ဘီလီဇ်တွင်ကော်ပိုရိတ်ဘဏ်စာရင်းများဖွင့်လှစ်ရန်နှင့်ဘီလီဇ်မှကုမ္ပဏီများအတွက်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ကိုလိုအပ်ပါကကူညီပေးပါမည်။ ငါတို့မှတဆင့်ဘေလီဇ်။ သင်သည်သင်၏ကုမ္ပဏီကိုဘီလီဇ်တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ သင်နှင့်သင်မိသားစုဝင်များအတွက်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရရှိခဲ့သောသင်နှင့်သင်မိသားစုအတွက်ဘီလီဇ်အတွက်ပြည့်စုံသော ၀ န်ဆောင်မှုအထုပ်တစ်ခုလည်းပေးနိုင်ပါသည်။ အဘို့ ဘီးလီဇာနေထိုင်ခွင့်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ
ဘီလီဇ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏လူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်ဖောက်သည်များအား“ ၁ နာရီအခမဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေး” ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှေ့နေနှင့်ဆက်သွယ်ပါ belize ဥပဒေရေးရာအတွက် နေထိုင်ခွင့် belize.
ဘီလီဇ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံများနှင့်သင်ဘီလီဇ်တွင်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်သင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စရပ်ကိုဘေလီဇ်တွင်မြင့်မားသောပြောင်းလဲမှုများကြောင့်ဘီလီဇ်၌တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြေရှင်းမှုပေးသည်။
ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုများ - ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
Million Makers တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ န်ဆောင်မှုများစွာကိုဘီလီဇ်အပါအ ၀ င်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဝန်ဆောင်မှုပေးသူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှပင်ကမ်းလှမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံတို့တွင်စီးပွားရေးအဖြေရှာမှုများကိုအစပြုခြင်းကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးစီးပွားရေး ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများထဲမှတစ် ဦး ဖြစ်သည်ဟုပြောသင့်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ဘေလီဇ်ရှိအကောင်းဆုံးစီးပွားရေးနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများ” ကိုစျေးအသက်သာဆုံးစျေးနှုန်းဖြင့်ပေးသည်။
WE Belize အတွက်အဖြေရှာပေးသူများသာရှိပါသည်။
ဘီလီဇ်ရှိ IBC အတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏အခြေခံ ၀ န်ဆောင်မှုတွင် - ဘီလီဇ်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီတွင် -
ဘေလီဇ်အတွက်ရှယ်ယာရှင်များ၊ ဒါရိုက်တာများနှင့်အသင်း ၀ င်များကိုမှတ်ပုံတင်ပါ။
ဘီလီဇ်ရှိ IBC အတွက်အသင်း၏စာချွန်လွှာနှင့်ဆောင်းပါးများ / ဘီလီဇ်ရှိအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ။
ဘီလီဇ်ရှိ IBC အတွက်ဝေမျှလက်မှတ် / ဘေလီဇ်ရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီလက်မှတ်စာအုပ်။
ဘီလီဇ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသော IBC အတွက်မှတ်ပုံတင်လက်မှတ် (Belize) တွင်မှတ်ပုံတင်ထားသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ။
မှတ်ပုံတင်ထားသောကိုယ်စားလှယ်။ ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်ပါက၊ ဘီလီဇ်ရှိ International Business Company ။
မှတ်ပုံတင်ရုံး။ မှတ်ပုံတင်ရန်လိုအပ်လျှင်ဘီလီဇ်ရှိ IBC / Belize ရှိ International Business Company ။
ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောစာရွက်စာတမ်းများ / ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း
မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်လိုအပ်သောကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများ ဘီလီဇ်ရှိ IBC / ဘီလီဇ်ရှိနိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ:
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများ: သင်ဟာဘေလီဇ်တွင်လိုအပ်သောလိုင်စင်မပါဘဲလုပ်ဆောင်မှုကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များမှခွင့်ပြုထားသည့်ဘီလီဇ်တွင်ခွင့်ပြုချက်ပြုပါက၊ Million Makers မှကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်တွင်ဘဏ်စာရင်းဖွင့်လှစ်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်လိုင်စင်မဲ့လှုပ်ရှားမှုများနှင့်စပ်လျဉ်း။ သင့်အားကူညီနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လိုင်စင်ရလှုပ်ရှားမှုများဥပမာအနည်းငယ်: လောင်းကစားခြင်း၊ လောင်းကစားခြင်း၊ Lotteries များ၊ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ခြင်းနှင့်အရောင်းအ ၀ ယ်ခြင်း၊ အကျိုးဆောင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဘီလီဇ်ရှိအာမခံလုပ်ငန်း၊ ဘဏ္Belာရေးနှင့်ကုန်စည်ကိုအခြေခံသောအနကျအဓိပ်ပါယျတူရိယာများနှင့်ဘီလီဇ်ရှိအခြားငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ်များ၊ ဘီလီဇ်တွင်အပြန်အလှန်ဖလှယ်ခြင်း၊
သင်ဘေလီဇ်ရှိ Crytocurrency လိုင်စင်လိုင်စင်ချထားပေးရန်အကူအညီလိုအပ်ပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။
ဘီလီဇ်နှင့် "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ပြည်နယ် ၅၀ အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၉ နိုင်ငံ" တွင်ဘီလာစီတွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတွက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များ။
ဘီလီဇ်တွင်ပြုလုပ်သူသန်းချီသောသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာမိတ်ဖက်များနှင့်ဘေလီဇ်ရှိ Professional CFA နှင့်ပေါင်းသင်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်စာရင်းကိုင်များ၊ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတိုင်ပင်ခံများဖြင့်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘေလီဇ်ရှိတစ် ဦး ချင်းအခွန်ထမ်းများနှင့်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဘီလီဇ်တွင်ကြီးမားသောအစုစုကိုစီမံသည်။
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဘေလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်ဘီလီဇ်နှင့်ကုမ္ပဏီ ၁၀၉ နိုင်ငံတို့မှဖောက်သည်များကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။
ဘီလီဇ်ရှိ Corporate Services | ဘီလီဇ်စီးတီးအတွက်ကော်ပိုရိတ်န်ဆောင်မှုများ
ဘေလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဘေလီဇ်ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်ဘေလီဇ်ရှိကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံများ၊ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ဘလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာအတိုင်ပင်ခံ၊ Belize ရှိ Offshore ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Belize ရှိကော်ပိုရိတ်ဝန်ဆောင်မှုများအတွက်, Belize ရှိ Offshore Company တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် Belize ရှိ Corporate Services အတွက် Belize မှ Corporate အတိုင်ပင်ခံ
ဘီလီဇ်ရှိ Corporate အတိုင်ပင်ခံ | ဘီလီဇ်စီးတီးအတွက်ကော်ပိုရိတ်အတိုင်ပင်ခံ
ဘေလီဇ်နှင့်နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၆ နိုင်ငံရှိကျွန်ုပ်တို့၏အထူးပြု ၀ န်ဆောင်မှုများ
သင်၏ကုမ္ပဏီ Belize တွင်မှတ်ပုံတင်ပြီးသည်နှင့်အွန်လိုင်းလျှောက်ထားပါ အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ကုန်သည်အကောင့် belize.
သင် outsource လုပ်နိူင်သည့် Belize တွင်သင်၏ကုမ္ပဏီတွင်ပါဝင်သည် စာရင်းကိုင်လိုအပ်ချက်များကို ဘေလီဇ်၌တည်၏။
HR အတိုင်ပင်ခံ Belize တွင်ပေးအပ်ထားသည့်သင်၏ ၀ န်ထုပ်ဝန်ပိုးသည်သင်၏ဝန်ထုပ်ကိုဝန်ထုတ်။ Belize တွင်စုဆောင်းနိုင်သည်။
ကျနော်တို့ကိုထောကျပံ့ ဘီလီဇ်တွင်အဆင်သင့်ပြုလုပ်ထားသောကုမ္ပဏီ နှင့်ဘေလီဇ်နှင့်အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း 107 "ဟုလည်းလူသိများ"အသက်ကော်ပိုရေးရှင်းဘေလီဇ်၌တည်၏
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပြီးနောက်သင်၌အခြားဝန်ဆောင်မှုများလိုအပ်သည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ပါ belize.
ဘေလီဇ်အတွက် Cryptocurrency လိုင်စင်
သင်အကူအညီလိုအပ်ပါက cryptocurrency လိုင်စင် ကမ်းလွန်သို့မဟုတ် EU တရားစီရင်မှုများအတွက်ဘေလီဇ်ကနေ။
ဘေလီဇ်အတွက် CRM Solutions
CRM ဆော့ဝဲ ဘီလီဇ်ရှိသင်၏ဖောက်သည်ဆက်သွယ်ရေးနှင့်အထောက်အပံ့ကိုထိရောက်စွာထိန်းချုပ်နိုင်ရန်ကူညီသည်။
Virtual Number - Belize အတွက် VoIP
Virtual နံပါတ် Belize ရှိစီးပွားရေး VoIP အပါအဝင် Belize ရှိအခြား VoIP ဖြေရှင်းချက်များ Belize ရှိနေထိုင်ရန် VoIP ။
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း လျှောက်လွှာ ၁ ခုသာရှိသောနိုင်ငံပေါင်း ၁၁၉ နိုင်ငံအတွက်ဘေလီဇ်မှ
ငါတို့အသင်း ဝဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခြင်း belize Belize တွင်ထည့်သွင်းထားသောသင်၏ကုမ္ပဏီသစ်အတွက်လှပပြီးထူးခြားသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ $ 100 နှင့်အတူစတင်
ဘီလီဇ်ရှိ Software Development ကုမ္ပဏီ
ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာပေး Web ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု belize, Belize ရှိ CryptoCurrency Software ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် Belize ရှိ App ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။
ဘေလီဇ်တွင်စျေးနှုန်းချိုသာသောဆော့ဝဲလ်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ | ဘေလီဇ်အတွက်စျေးနှုန်းချိုသာသောအီလက်ထရွန်းနစ်စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု
အမြတ်အစွန်းမြင့်မားသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများပိုင်ရှင်များ၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ဘီလီဇ်တွင်မြန်ဆန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုထောက်ခံရန်နှင့်၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ တိကျသောလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အစိုးရစည်းမျဉ်းများနှင့်ဘီလီဇ်တို့ပါ ၀ င်သောတိကျသောလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလျင်မြန်စွာလိုက်နာရန်အတွက်ရှာဖွေသူများ ဘီလီဇ်ရှိကုမ္ပဏီတစ်ခု (သို့) ဖောက်သည် ဦး စားပေးသောကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်သည့်နေရာ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတွေ့အကြုံများကြွယ်ဝသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည့်အရာများနှင့်သူတို့ကိုမကူညီနိုင်မည့်အရာများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များကဘီလီဇ်တွင်သူတို့၏ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုယုံကြည်ကြသည်။
ဘီလီဇ်တွင်နေထိုင်သော IBC နှင့်ဘီလီဇ်တွင် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်းကိုနိုင်ငံခြားသားများအားထောက်ပံ့သည်။ ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီဖွဲ့စည်းမှု၊ ဘီလီဇ်တွင်ပြုလုပ်သော IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ရှိသော IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ , ဘီလီဇ် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဘီလီဇ် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း, ဘေလီဇ် IBC မှတ်ပုံတင်မည်, ဘေလီဇ်ကမ်းလွန် IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း, ဘေလီဇ်ကမ်းလွန် IBC မှတ်ပုံတင်။
ဘီလီဇ်တွင် IBC ပါဝင်မှုကိုထောက်ပံ့သည် ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ဘီလိဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း | ဘီလီဇ်တွင် IC ပါဝင်မှု
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဘေလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ပါ ၀ င်သည့်နိုင်ငံခြားသားများအားဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ပြုလုပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီ၊ ဘေလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဘီလီဇ်တွင်ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘလီဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘလီဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဘေလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုဘေလီဇ်တွင်ဖော်ပြထားသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီကိုဘီလီဇ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီများပူးပေါင်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဘေလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့်နိုင်ငံခြားသားများကိုထောက်ခံသည်။ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဘီလီဇ်တွင်နေထိုင်သူများနှင့်ဘီလီဇ်တွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်းရှိသောနိုင်ငံခြားသားများအားလည်းဘီလီဇ်တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အိုင်စီတီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘေလီဇ်ရှိကမ်းလွန် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်အိုင်အက် (ဖ်) ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အိုင်အက်စ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊
IBC ကို Belize တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ IC ကို Belize တွင်မှတ်ပုံတင်ပါ
မေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ - ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်မှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံသည်။ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်စီးတီးမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်စီးတီးမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်စီးတီးမှကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများမှတ်ပုံတင်ခြင်း။
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းဘီလီဇ်ရှိကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းကိုယ်စားလှယ်များ၏အကူအညီဖြင့်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဘီလီဇ်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များမှကူညီခြင်းဖြင့်အောင်မြင်သည်။ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းမှုကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘီလီဇ်စီးတီး၊ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိဘီလီစီစီးတီးရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကိုယ်စားလှယ်များ။
သင်ဘေလီဇ်တွင်တတ်နိုင်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုပေးပါသလား
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘီလီဇ်မှာစျေးအချိုဆုံးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘီလီဇ်မှာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘီလီဇ်မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုနဲ့ဘီလီဇ်မှာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်တော်တို့ပေးပါတယ်။ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိဘီလီစီစီးတီးရှိကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု၊
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများပေးပါသလား။
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ပါ၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထည့်သွင်းပါ၊ ဘီလီဇ်စီးတီးရှိ setup ကုမ္ပဏီ၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ။
ဘီလီဇ်တွင်တန်ဖိုးနည်းကုမ္မဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာသည့်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှု
ဘီလီဇ်တွင်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ဘဏ်စာရင်းရှိနိုင်ငံခြားသားများအတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေလီဇ်စီးတီးရှိမြို့တွင်း၌နေထိုင်သူများအတွက်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နိုင်ငံခြားသားအားဘီလီဇ်တွင်မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီသည်။ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်နိုင်ငံခြားသားမှတ်ပုံတင်ဘဏ်ဘဏ်စာရင်းရှိခြင်း။
ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဘီလီဇ် | ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများဘီလီဇ်စီးတီး
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခ၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခ၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျစရိတ်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ကုန်ကျမှု၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကုန်ကျစရိတ်။ ဖွဲ့စည်းမှုကုန်ကျစရိတ်ဘီလီဇ်မှာကုမ္ပဏီကုန်ကျစရိတ်ဘီလီဇ်။
ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန် (သို့) ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုမည်သို့တည်ထောင်မည်နည်း။
ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးစတင်ရန် (သို့) ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘေလီဇ်တွင်နိုင်ငံခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်ရန်ဘီလီဇ်တွင်လိုအပ်သောလိုအပ်ချက်အချို့ရှိသည်။ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Belize မှာထည့်သွင်းပါ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု Belize စီးတီး၌ထည့်သွင်း
ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့်သင်ကူညီနိုင်ပါသလား ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ဘီလီဇ်တွင် IC မှတ်ပုံတင်ခြင်းလား။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဘီလီဇ်မှာနေထိုင်သူများနှင့်ဘီလီဇ်အိုင်ဘီစီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘေလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင် IBC မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိ IBC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီဖွဲ့စည်းမှု၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အိုင်ဘီစီမှတ်ပုံတင်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက် IBC၊ ဘီလီဇ်အိုင်ဘီဘီမှတ်ပုံတင်၊ ဘီလီဇ်တွင် IBC ပါဝင်မှုနှင့်ဘေလီဇ်နှင့်နေထိုင်သူများမဟုတ်သောဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်နိုင်ငံ၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလိဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်နိုင်ငံရှိကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလိဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဘီလီဇ်နှင့်ဒေသခံမဟုတ်သူများနှင့်ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ရှိကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘေလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်လုပ်ကွက်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်လုပ်ကိုင်သောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီနှင့် Belize နှင့်နေထိုင်သူမဟုတ်သူများနှင့်အတူ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ hore အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘေလီဇ်နှင့်ဘီလိဇ်နှင့်အတူနေထိုင်သူများမဟုတ်သူများ၊ ဘေလီဇ်တွင် IC ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘီလီဇ်အိုင်အက်စ်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ဘီလီဇ်ကမ်းလွန်အိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘေလီဇ်ကမ်းလွန်အိုင်မှတ်ပုံတင်မှု၊ ဘီလီဇ်တွင်ကမ်းလွန်အိုင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘေလီဇ်တွင်ကမ်းလွန် IC ပေါင်းစည်းမှု၊
ဘီဘီဇ်တွင် IBC ထည့်သွင်း ဘေလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထည့်သွင်းပါ ဘီလီဇ်တွင်ရှိသောကမ်းလွန်စီးပွားရေးကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းပါ ဘီလီဇ်တွင်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ပါ IC Belize အတွက်ထည့်သွင်း
ဘီလီဇ်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီ Incorporation Services | ဘီလီဇ်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှု ဘီလီဇ်တွင်ထိပ်တန်းကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း
သင်၏ကုမ္ပဏီကုမ္မဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘေလီဇ်တွင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးပြုသင့်သည်သို့မဟုတ်ဘေလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီ၏မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကျွန်ုပ်ဘာကြောင့်သုံးသင့်သနည်း။
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ခြင်းအတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုထူးကဲမှုကိုထိန်းသိမ်းထားပါသည်။ ဘီလီဇ်၌ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီများစုဆောင်းမှုကိုယ်စားလှယ်များအဖြစ်လူသိများသောဘေလီဇ်ရှိအရည်အသွေးကောင်းမွန်သောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းစာရင်းကိုင်များကြောင့်ဘေလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်းထားများကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပါသည်။ Belize တွင်နှင့် Belize ရှိကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းအတိုင်ပင်ခံများကသင် Belize ရှိစျေးနှုန်းချိုသာသောကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုပေးသည်။
ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်စျေးသက်သာစာရင်းကိုင်များ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်အတွက်တတ်နိုင်သောစာရင်းကိုင်များ
နေထိုင်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအတွက်ဘေလီဇ်ရှိအထူး ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘီလီဇ်တွင်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအပါအ ၀ င်နေထိုင်သူများမဟုတ်သူများနှင့်နိုင်ငံခြားသားများအားအထူးကူညီပံ့ပိုးမှုများပေးသည်။ သင်ဟာနိုင်ငံခြားသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဘီလီဇ်မှာကုမ္ပဏီဖွင့်ချင်တယ်ဆိုရင်၊
သင်သည်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန် ၀ န်ဆောင်မှုများလိုအပ်ပါက၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ ဘီလီဇ်တွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ပါ။ အလားတူဘဲလီဇ်စီးတီးတွင်ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်၊ ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှတ်ပုံတင်ရန်သို့မဟုတ်ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ရန်သို့မဟုတ်ဘီလီဇ်စီးတီးတွင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်၊ စီးတီး, ဘီလီဇ်စီးတီးအတွက်ကုမ္ပဏီတစ်ခု setup ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန - ဘေလီဇ်
ဗီဇာ / Entry လိုအပ်ချက်များ
Google Earth ဘေလီဇ်
Destination Belize - နိုင်ငံလမ်းညွှန်များ
ဘီလီဇ် Barrier Reef Reserve System
Seine Bight ကျေးရွာ
ဘီလီဇ်အမျိုးသားဥယျာဉ်၊ သဘာ ၀ သယံဇာတနှင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောများ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ - ဘီလီဇ်
လူ့အခွင့်အရေးစောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့ - ဘီလီဇ်
ဘီဘီစီနိုင်ငံ၏ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း - ဘီလီဇ်
FAO - ဘေလီဇ်
Worldbank ဒေတာ: ဘေလီဇ်
နယ်စည်းမခြားသတင်းထောက်များ - ဘီလီဇ်
ဓနသဟာယ - ဘေလီဇ်
ကမ္ဘာ့အဖြစ်မှန် - ဘီလီဇ်
အတ္တလန္တိတ်ဘဏ်လီမိတက် - https://www.atlabank.com/
အတ္တလန္တိတ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ်လီမိတက် - http://www.atlanticibl.com/
ဘီလီဇ်ဘဏ်လီမိတက် - https://www.belizebank.com/
ဘီလီဇ်ဘဏ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလီမိတက် - https://www.belizebankinternational.com/
အမွေအနှစ်ဘဏ်လီမိတက် - https://www.heritage.com.au/
Heritage International Bank နှင့် Trust Limited- https://www.heritageibt.com/
Firstcaribbean အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဘဏ် - https://www.cibcfcib.com/
Handels Bank And Trust Co. , Ltd- https://transferwise.com/in/swift-codes/HATTBZB1XXX
Itrend လီမိတက် https://beta.companieshouse.gov.uk/company/113072
New Horizon ဘဏ္Servicesာရေးဝန်ဆောင်မှုလီမိတက် - http://www.nhcapital.in/
Scotiabank ဘေလီဇ်လီမိတက်- https://bz.scotiabank.com/personal.html
Xferion လက်တင်အမေရိက S A- https://xferion.com/
မှတ်ချက် * ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဘီလီဇ်၊ မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်မှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုများမှငွေခဝါချခြင်းကိုလုံးဝဆန့်ကျင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကဲ့သို့သော Clients များအားထောက်ခံမှုမပြုပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့ပံ့ပိုးခြင်းသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ခြင်းမပြုပါ belize အောက်ဖော်ပြပါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများသို့:
●ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုကုန်သည်တွေ၊ ဖြန့်ဖြူးသူတွေဒါမှမဟုတ်လက်နက်တွေ၊ လက်နက်တွေ၊ ခဲယမ်းတွေ၊ ကြေးစား၊
●ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုနည်းပညာဆိုင်ရာစောင့်ကြည့်ခြင်း၊ ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းသို့မဟုတ်ဘေလီဇ်အတွင်းမှသို့မဟုတ်သို့သွားသောစက်မှုလုပ်ငန်းသူလျှိုများအတွက်ထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
●ဘီလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုဘယ်လာဇီစ်ဥပဒေအောက်မှာအနက်ရောင်စာရင်းဝင်ထားတဲ့တရားမဝင်၊
●ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘေလီဇ်တွင်ဖြစ်စေ၊ သို့ဖြစ်စေမျိုးဗီဇဆိုင်ရာပစ္စည်းများကိုရောင်းဝယ်သူတစ် ဦး ချင်းသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများသို့ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောဇီဝဗေဒဆိုင်ရာနှင့်သက်ဆိုင်သောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။ ဘေလီဇ်မှနျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်ပတ်သက်သောစက်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်စက်ပစ္စည်းများအပါအ ၀ င်နျူကလီးယားပစ္စည်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအား၊ ထိုကဲ့သို့သောပစ္စည်းများကိုထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖယ်ထုတ်ခြင်း။
●ဘီလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်လူနှင့်တိရစ္ဆာန်များကိုကုန်သွယ်ခြင်း၊ သိုလှောင်ခြင်းသို့မဟုတ်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်း၊ တိရိစ္ဆာန်များအလွဲသုံးစားပြုခြင်းသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်စမ်းသပ်မှုအတွက်တိရိစ္ဆာန်များကိုအသုံးပြုခြင်း၊
●ဘီလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်မွေးစားခြင်းဆိုင်ရာအေဂျင်စီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ၊ အငှားမိဘအုပ်ထိန်းမှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ (သို့) ဘီလီဇ်တွင် (သို့) မှလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုပုံစံများအပါအ ၀ င်။
●ဘီလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများဘာသာရေးကိုးကွယ်မှုနှင့်၎င်းတို့၏ပရဟိတလုပ်ငန်းများကိုဘေလီဇ်တွင်သို့မဟုတ်လာရောက်သူများအားထောက်ပံ့ပေးသည်မဟုတ်။
●ဘီလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီမှတ်ပုံတင်ခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုအခြေခံသောဘီလီဇ်ကုမ္ပဏီများမှပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ပေးအပ်ခြင်းမရှိပါ။
●ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများသည်ပိရမစ်ရောင်းဝယ်မှုကိုလုပ်ဆောင်နေသောတစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဘီလီဇ်တွင်ဖြစ်စေ၊ Belize မှဖြစ်စေရောင်းချခြင်းမပြုပါ။
●ဘေလီဇ်အတွက်ကုမ္ပဏီရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုကိုမူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်းလုပ်ငန်းမှာလုပ်ကိုင်နေတဲ့တစ် ဦး ချင်းပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ဘီလီဇ်မှာဖြစ်စေ၊
"အရေးကြီးသတိပြုပါ : Million Makers သည်ကုမ္ပဏီတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်သတင်းအချက်အလက်များကိုသုတေသနပြုခြင်းနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာဂရုစိုက်ခဲ့သည် belizeတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်း၏သတင်းအချက်အလက် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသို့မဟုတ်အခြားဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ပျက်စီးခြင်းအတွက်မည်သည့်တာ ၀ န်ကိုမဆိုကျွန်ုပ်တို့လက်မခံပါ။ ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုသူများသည်မိမိကိုယ်တိုင်ပါ ၀ င်မှုမပြုမီသင့်လျော်သောကျွမ်းကျင်သောအကြံဥာဏ်များရယူရန်အကြံပေးသည် belize, belize ဘဏ်အကောင့်, belize ယုံကြည်မှု belize ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသို့မဟုတ်ထောက်ပံ့ပေးအခြားမည်သည့်ဝန်ဆောင်မှု belize။ "
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်လမ်းညွှန် နှင့် ထောက်ပံ့ ဘီးလီဇ်ဘို့
အသုံးပြုသူသည် https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-belize-ibc/ တွင်ပုံစံကိုဖြည့်စွက်ထားသည်။
သင့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ရှိဆိုက်ကပ်စာမျက်နှာ - https://www.millionmakers.com/company-formation/company-formation-belize-ibc/